नेपाली देखि फ्रेन्च नेपाली अनुवादक | फ्रेन्च-नेपाली अनलाइन अनुवाद र शब्दकोश - Lingvanex।
नेपाली देखि फ्रेन्च
नेपालीबाट फ्रेन्च मा प्रत्येक निःशुल्क अनुवादको लागि Lingvanex अनुवाद एपहरू प्रयोग गर्नुहोस्। हामी नि:शुल्क फ्रेन्च नेपाली अनुवादकका लागि मेसिन ट्रान्सलेसन टेक्नोलोजी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लागू गर्छौं।
नेपालीबाट फ्रेन्च अनलाइनमा अनुवाद गर्नुहोस्
फ्रेन्च मा सप्लायरको इमेल वा विदेशमा बिदाको लागि वेबसाइट अनुवाद गर्न आवश्यक छ? Lingvanex ले नेपालीबाट तत्कालै फ्रेन्च मा अनुवाद गर्ने कार्यक्रमहरू र अनुप्रयोगहरू प्रस्तुत गर्दछ!
एउटा फ्रेन्च अनुवाद चाहिन्छ? त्यसो गरौं!
Lingvanex नि: शुल्क सेवाले शब्दहरू, वाक्यांशहरूलाई आवाजमा, अडियो फाइलहरू, पोडकास्ट, कागजातहरू, र वेब पृष्ठहरू फ्रेन्च बाट नेपालीमा र नेपालीबाट फ्रेन्च मा अनुवाद गर्दछ।
Lingvanex अनुवाद अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई कुनै पनि समयमा मद्दत गर्नेछ! विभिन्न यन्त्रहरूमा काम गर्ने हाम्रा एप्लिकेसनहरू - एन्ड्रोइड, आईओएस, म्याकबुक, गुगलका स्मार्ट सहायकहरू, अमेजन एलेक्सा, र माइक्रोसफ्ट कोर्टाना, स्मार्टवाचहरू, जुनसुकै ब्राउजरहरू - जुनसुकै ठाउँमा नेपालीबाट फ्रेन्च मा अनुवाद गर्न मद्दत गर्नेछन्! यो सजिलो र नि: शुल्क छ! Lingvanex ले फ्रेन्च बाट नेपालीमा अनलाइन अनुवाद पनि प्रदान गर्दछ।
Lingvanex अनुवाद सफ्टवेयर द्वारा नेपाली देखि फ्रेन्च अनुवादले तपाईंलाई नेपालीबाट फ्रेन्च र अन्य ११० भन्दा बढी भाषाहरूमा शब्द, वाक्यांश र पाठहरूको पूर्ण अनुवाद प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
छिटो र तुरुन्तै एक फ्रेन्च नेपाली पाठ नि:शुल्क अनुवाद गर्न Lingvanex अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नुहोस्। Lingvanex ले नेपालीबाट फ्रेन्च र फ्रेन्च बाट नेपाली भाषामा Google अनुवाद सेवाको पहुँचयोग्य विकल्प प्रदान गर्दछ।
नेपालीमा फ्रेन्च पाठ अनुवाद कसरी काम गर्छ?
हाम्रो अनुवाद सेवाले तपाईंले टाइप गर्नुभएको पाठलाई नेपालीमा अनुवाद गर्न Lingvanex अनुवादक मेसिन इन्जिन प्रयोग गर्दछ। जब तपाइँ नेपालीमा शब्द, वाक्यांश वा वाक्य टाइप गर्नुहुन्छ - हामी अनुवादको लागि लिङ्गभेनेक्स इन्जिनलाई API अनुरोध पठाउँछौं। बदलामा, तिनीहरूको अनुवाद सेवा Lingvanex ले फ्रेन्च मा अनुवादित पाठको साथ जवाफ पठाउँछ। Lingvanex ले उच्च गुणस्तरीय अनुवादहरू प्रदान गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (गहिरो शिक्षा), ठूलो डाटा, वेब API, क्लाउड कम्प्युटिङ, आदि जस्ता उन्नत प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ। तपाईं अहिले नै नेपालीबाट फ्रेन्च मा अनुवादको गुणस्तर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
होइन। तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न। एक क्षणमा तपाईले यो पृष्ठमा हाम्रो फ्रेन्च अनुवाद अनलाइन मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, तपाइँ Lingvanex - अनुवादक र शब्दकोश क्रोम एक्सटेन्सन भनिने क्रोम विस्तार उपकरण स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। वा हाम्रो अनुवाद अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नुहोस् - यी अनुप्रयोगहरूको लिङ्कहरू पृष्ठमा छन्। यो अनुवाद उपकरण स्थापना भएपछि, तपाइँ हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ र पाठको खण्डमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र अनुवाद गर्न "अनुवाद" आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यस तरिकाले तपाईंले नेपालीबाट फ्रेन्च मा मात्र होइन, तर एप्लिकेसनद्वारा समर्थित कुनै पनि ३६ भाषाहरू बीचमा पनि अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाइँ ब्राउजर टूलबारमा रहेको "अनुवाद" आइकनमा क्लिक गरेर नेपालीबाट वेब पृष्ठलाई फ्रेन्च मा अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ।
नेपालीबाट फ्रेन्च मा अनुवाद कत्तिको सही छ?
अनुवाद गर्न मेसिन भाषा प्रविधि प्रयोग गरिन्छ। हाम्रो अनुवाद सफ्टवेयर दैनिक रूपमा विकसित भइरहेको छ र धेरै सटीक नेपाली अनुवाद फ्रेन्च प्रदान गर्दछ। तपाईं यसलाई अहिले आफै जाँच गर्न सक्नुहुन्छ!